SCBA Fund Raising Event – Myanmar Language Course Students (July 24th, ၂၀၁၁) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Events/Fundraise » SCBA Fund Raising Event – Myanmar Language Course Students (July 24th, ၂၀၁၁)
SCBA Fund Raising Event – Myanmar Language Course Students (July 24th, ၂၀၁၁)
Posted by kai on Jun 8, 2011 in Events/Fundraise | 1 comment
SCBA Fund Raising Event
အယ်လ်အေက မြန်မာအသင်းဦးစီးလုပ်နေတဲ့.. မြန်မာစာသင်တန်းကျောင်းက ကလေးများရဲ့ ရန်ပုံငွေပွဲပါ..။
အောက်ကအီးမေးလ်ရတာမို့ .. ရ,ရတဲ့အတိုင်းပဲ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..။
အဲဒီအီးမေးလ်အရ.. ၂၀၁၀ အတွင်းလုပ်ခဲ့တဲ့.. မြန်မာအသင်းရဲ့.. အမှတ်တရဓါတ်ပုံစာအုပ်လည်း ရောင်းပါမယ်တဲ့..။
We are very proud to announce our SCBA Fund Raising Event presented by Myanmar Language Course Students.
Date: July 24th, Sunday.
Location: Aung Zay Hall (629 B. East Garvey Ave. Monterey Park Ca 91755)
Entertainment: SCBA Burmese Class Student will be performing
Food will be sold accordingly
We also haveapictorial book that we would like to share with everyone. If you would like to purchase the booklet for the year of 2010 for all of SCBA Events. Please contact Henry Kao(626-428-4727) for further details and pricings.
To viewasample of the booklet please go to the link below.
Southern California Burmese Association
မြန်မာပြည်ကကလေးတွေ ဘိုကျောင်းဘဲတက်ပြီး မြန်မာစာမသင်ကြတော့တဲ့ အချိန်မှာ LA ကသားသမီးကို မြန်မာစာ သင်ပေးတဲ့ မိဘတွေရော သင်တန်းကျောင်းလုပ်ပေးတဲ့ SCBA ရော လေးစားပါတယ်။ လိုအပ်မယ့် စာအုပ်စာတမ်းများရှိရင် အကြောင်းကြားပါ။ကူညီပေးရန် အသင့်ပါ။